Warar - Shaqada kala goynta qalabka Gear ayaa faa'iido leh
INTECH waxay leedahay waayo-aragnimo ballaaran oo ku saabsan injineernimada qalabka iyo naqshadeynta, taas oo ah sababta ay macaamiisha noogu soo dhowaadaan markay raadinayaan xal u gaar ah baahiyaha gudbinta. Laga soo bilaabo Waxyi ilaa Ogaansho, waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa kooxdaada si aan u siino taageero injineernimo khabiir ah inta lagu gudajiro nidaamka qaabeynta. Adeegyadeena gudaha iyo SolidWorks CAD softiweerka waxay na siinayaan taageero injineernimo oo cajiib ah iyo karti aan ku siino adeegyo badan oo injineernimada qalabka. Adeegyadan waxaa ka mid ah:
Dib-u-hagaajinta injineernimada waxay noqon kartaa farsamo waxtar leh oo lagu xalliyo dhowr dhibaatooyin naqshadeynta qalabka caadiga ah. Dhaqankan waxaa loo adeegsan karaa in lagu go'aamiyo joomatari geerka jir duug ah oo gaboobay kaas oo u baahan in la beddelo, ama in dib loo sameeyo qalab marka sawirradii asalka ahaa aan la heli karin. Nidaamka injineernimada gadaal waxaa ka mid ah dib-u-habeynta qalabka ama isku-dubbaridka si loo qiimeeyo loona falanqeeyo. Iyadoo la adeegsanaayo aaladaha cabbiraadda iyo kormeerka sare, kooxdayada khibradda leh ee injineernimada waxay adeegsadaan nidaamkan si loo go'aamiyo joomatari saxda ah ee qalabkaaga. Laga soo bilaabo halkaas, waxaan ka abuuri karnaa nuqul asalka ah, oo aan wax ka qaban karnaa soo saarista buuxda ee qalabkaaga.
Marka ay timaado wax soo saarka ballaaran, injineernimada qalabka iyo naqshadeynta ayaa muhiim ah. Naqshadeynta wax soo saarku waa habka naqshadeynta ama wax soo saarka injineernimada sidaa darteed way fududahay soo saaristeeda. Nidaamkani wuxuu u oggolaanayaa dhibaatooyinka suurtagalka ah in la ogaado goor hore wajiga naqshadeynta, taas oo ah waqtiga ugu kharash yar ee lagu hagaajinayo. Naqshadaynta qalabka, tixgelinta taxaddar leh waa in lagu dhejiyaa joomatari geerka saxda ah, xoogga, qalabka la isticmaalay, isku toosinta iyo wixii intaa ka sii badan. INTECH waxay leedahay khibrad ballaaran oo ku saabsan naqshadeynta qalabka wax soo saarka.
Halkii aad ka bilaabi laheyd xoqida, INTECH waxay ku siineysaa awooda aad dib ugu qaabeyn karto qalabka - xitaa haddii aanan soo saarin asalka. Haddii qalabkaagu u baahan yahay horumarin yar, ama dib u qaabayn dhammaystiran, injineernimadayada iyo kooxaha wax soo saarkeennu way kula shaqeyn doonaan si loo hagaajiyo tayada qalabka.
Waxaan ka caawinnay macaamiil aan tiro lahayn inay abuuraan xalka saxda ah ee ay u baahan yihiin.
Waqtiga boostada: Jun-24-2021